Angina Unstable (နှလုံးရောဂါကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Angina Unstable (နှလုံးရောဂါကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Angina Unstable (နှလုံးရောဂါကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း)
Angina Unstable (နှလုံးရောဂါကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း) ကဘာလဲ။
angina ဆိုတာ နှလုံးကို သွေးမရောက်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ နှလုံးအောင့်ခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ ဒါဟာ ခန္ဒါကိုယ်တွင်း သွေးကြောများ ကျဉ်းခြင်း သို့ ပိတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ နှလုံးဟာ သွေးများ သယ်ယူရန် oxygen( အောက်ဆီဂျင်) လိုအပ်ပါတယ်။ Angina ၃ မျိုးရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ
Angioplasty and stenting။ ။ ဒါကတော့ သွေးကြောပေါက်ဖွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျဉ်းနေတဲ့ သွေးကြောလေးထဲကို ပူပေါင်းသေးသေးလေးထည့်ပြီး ကျယ်သွားတဲ့ အခါမှာ stent လို့ခေါ်တဲ့ ဝါယာအသေးလေးနှင့် အစားထိုးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေပြီး unstable angina လူနာတွေမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။
Coronary artery bypass ။ ။ ဒါကတော့ ပိတ်နေတဲ့ သို့ ကျဉ်းနေတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောကို တခြား ခန္ဒါအစိတ်အပိုင်းမှ သွေးပြန်ကြော သို့ သွေးလွှတ်ကြောနှင့် အစားထိုး လမ်းကြောင်းလွှဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ ဆေးဝါးနှင့် အလုပ်မဖြစ်တဲ့ Stable ရော unstable angina ရော နှစ်ခုလုံးအတွက် ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Porter, Robert. Kaplan Justin. Homeier Barbara.The Merck manual home health handbook. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2009.Print edition. Page 406